Tag: Mgbasa ozi mkpọsa | Martech Zone
Tag: mkpọsa bọọdụ
N'oge ọrịa a, ahịa mgbasa ozi nwere nnukwu nsogbu. N'ezie, atụmanya, mana 19.1% dobe na H1 220 bụ nnukwu mmetụta maka azụmaahịa. COVID-19 agbanweela ebe ndị na-azụ ahịa, ebe ọ nwere ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nke ndụ a na-adị kwa ụbọchị. Ndị mmadụ na-eme njem obere ma na-emefu obere. Ọrịa ọjọọ a ga-agabiga na ọnwa ole na ole na-esote, mana ọnwa ndị a emeela mgbanwe ndị bụ isi na-apụta na ụwa mgbasa ozi. Ekwentị
Ọ bụ m bụ naanị onye ka na-ahụ ahịa azụmaahịa?
M nọ n'ụgbọala na West Side nke obodo ahụ, lere anya na bọọdụ, e nwere bọọdụ maka ngwá ọrụ. Kama mkpọsa akwụkwọ ahụ bụ mgbasa ozi a na-ahụkarị, mkpọsa ahụ gafere n'ala. Otu ogwe aka gbagoro na post na ngwá ọrụ ahụ dị na ebe a na-ede akwụkwọ. Eketie nte n̄kpọ eke ubọk oro otode ke isọn̄ osụhọde edi. Ọ bụrụ na m chọrọ hamma, aga m
Wednesday, July 15, 2009 Sunday, June 21, 2015 Adam Obere
Ahịa ahịa na-apụta ma na-aghọwanye ebe niile kwa ụbọchị. N’izu gara aga, m na-eleta ndị ezinụlọ na mpaghara Myrtle Beach ma hụ bọọdụ a. Ọ dị mma ịhụ nnukwu ihe na-adọrọ adọrọ na-ejikọta mobile n'ime atụmatụ ahịa ha niile. Doug nwere njikọta mkpanaka yiri nke ahụ na saịtị ya, ị nwere ike ide ederede MartechLOG na 71813 wee nweta ọkwa mgbe ọ biputere! M bepụrụ shortcode na foto a ka a ghara ịnwa onye ọ bụla